Ahoana no ho lasa mpitantana ara-pitsarana
Mpisolovava, bola sy ny fitantanam-bola manam-pahaizana dia afaka ny enrol ao amin’ny bokim-pitantanana ara-pitsarana: nivoaka tamin’ny fomba Ofisialy Gazette ny didim-panjakana momba ny fomba fampiharana an-tserasera.
Ny tanjona ny fanendrena ny mpitantana dia tsy maintsy ho voasoratra ao amin’ny national register ny tale, ny fitsarana, izay vao haingana minisitra didim-panjakana no nametraka no nanorina izay ny fomba fidirana. Afaka enrol eo amin’ny fisoratana anarana ny mpitantana any amin’ny fitsarana ireo izay, domiciled tany Italia, raha ny marina entina avy amin’ny matihanina ny asa ary ireo voasoratra anarana, fara fahakeliny dimy taona maro: izy ireo dia Afaka misoratra anarana koa ireo izay nisoratra anarana ny asa ireo, fara fahakeliny, ny telo taona, dia nanome fa izy ireo no efa soa aman-tsara nanatrika taranja post-nahazo diplaoma fiofanana mikasika ny fitantanana ny orinasa na ny orinasa krizy. Ny enrolment amin’ny fizarana ny manam-pahaizana ao amin’ny fandraharahana ny fitantanana ny fepetra ho amin’ny fanatanterahana ny asa matihanina dia tsy maintsy nitatitra ny fitantanana ny orinasa na ny orinasa krizy. a) ianao ao amin’ny fanjakana ny fandraràna vonjimaika na ny fampiatoana avy amin’ny birao mpanatanteraka ny olona ara-dalàna ary ny orinasa (c) no manaraka ireto farany faharesen-dahatra ny sazy an-tranomaizina, na dia ny fepetra mihantona, tsy misy fitsarana an-tendrony ny vokatry ny fanarenana: — ho an’ny iray amin’ireo heloka bevava omena ho avy ny mpanjaka ny didim-panjakana enina ambin’ny folo volana martsa, tsy misy. (Fitsipi-pifehezana ny bankirompitra, firafitry amin’ny trosa, ny maso ny fitantanana sy ny fanerena ara-panjakana ny fanafoanana) — ho an’ny iray amin’ireo heloka bevava nanome ho amin’ny Lohateny XI ny Boky V ny Fehezan-dalàna Sivily (mpanao heloka bevava ny lalàna ny Fepetra eo amin’ny ny sehatry ny orinasa sy ny consortia) — ho heloka manohitra ny fitantanam-panjakana, nanohitra ampahibemaso ny finoana, manohitra ny fananana, hanohitra ny vahoaka toe-karena, mandritra ny fotoana tsy latsaky ny enim-bolana (d) tsy voalaza nandritra izay folo taona lasa izay, ny fitsipi-pifehezana ny sazy isan-karazany avy amin’ny fampitandremana, dia napetraky ny fikambanana matihanina. Ny fisoratana anarana ny mpitantana ny fitsarana dia natao tamin’ny solosaina ao amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana ary miavaka amin’ny ampahany an’ny daholobe sy anjara manokana. Ny vahoaka ampahany ny fisoratana anarana dia hita ao amin’ny tranonkala andrim-panjakana namany sary eo ambany»filankevi-pitantanana ara-dalàna», ary ahitana ny tranonkala pejy maimaim-poana ny fidirana. Ny vaovao (famantarana ny angon-drakitra ny Mpitantana, ao anatin’izany ny hetra fehezan-dalàna araka ny hita afa-tsy ho an’ireo izay manana ny zo hampiasa ny faritra voatokana — ary voamarina ny adiresy mailaka elektronika) dia navoaka araka ny angon-drakitra f Sokafy karazana. Ny anjara voatokana dia foana ao ny solosaina Rafitra ny Minisiteran’ny fitsarana amin’ny alalan’ny fomba mba hahazoana antoka ny tsiambaratelo sy ny fiarovana ny angon-drakitra. Ny fahazoana ny tsiambaratelo anjara ny Misoratra anarana ny Mpitantana, dia voafetra ihany ny tahirin-kevitra, amin’ny alalan’ny fampiasana ny toerana, taorian’ny elektronika famantarana. Ny tsiambaratelo anjara ny Misoratra anarana no mahazo miditra ny mpitsara, ny mpitarika ny chancelleries izay hiatrika ny resaka heloka bevava sy ny sekreteran’ny ny biraon’ny Mpampanoa lalàna, sy ny talen’ny sampan-draharaha na olona avy ny farany ny solontena.
Ny fidirana dia atao amin’ny alalan’ny tambajotra ny Minisitry ny fitsarana, rehefa mety elektronika amin’ny alalan’ny famantarana ny ADN
Ny fanekena ny fangatahana fisoratana anarana ao amin ny fisoratana Anarana dia ao amin’ny solosaina sy ny foto-kevitra mialoha fanamarinana ho amin’ny Vavahadin-tserasera ny telematic asa (PST) izay mahatonga anao hahazo ny faritra voatokana. Ny fahazoana ny faritra voatokana, ny mpampiasa dia afaka mameno ny teny fampiharana, ka ordinatera, ary ny hametahana ny antontan-taratasy ilaina. Ny application form sy ny kofehy mifamatotra, anisan’izany ny fandraisana ny fandoavam-bola mikasika ny fandraisana anjara, dia tsy maintsy ho alaina avy amin’ny mpampiasa, nanao sonia nomerika sy nalefa tany amin’ny rafitra solosaina noho ny fikarakarana amin’ny fomba on-line. — ny fangatahana dia mandray ny fifandraisana amin’ny alalan’ny fankatoavana ny e-mail ny famantarana ny mpitantana ny dingana — mamorona elektronika laha-tahiry izay misy ny antontan-taratasy sy ny dika mitovy ny solosaina ireo antontan-taratasy atolotra ny mpangataka sy ny an’ireo namorona ny lohany.
Ny fisoratana anarana ao amin’ny bokim dia noho ny fandoavam-bola mikasika ny fandraisana anjara naorina tamin’ny raikitra vola mitovy zato euros
Dia avy eo omena isan-taona fandraisana ny tombo-kase ny hisoratra anarana amin’ny vola zato euro izay ho karama tamin’izany fotoana izany ny fanekena ny fangatahana endrika sy ny taty aoriana noho ny telo-polo-voalohany ny volana janoary isan-taona. — fandoavam-bola, koa amin’ny alalan’ny fitaovana elektronika, paositra cheque, nanao hofany ny Fanjakana fandatsaham — petra-bola amin’ny rafitra hafa elektronika fandoavam-bola na mampiasa seky, karatra fandoavana na fisintonana vola na fitaovana hafa ny fandoavam-bola miaraka amin’ny vola elektronika hita ao amin’ny banky na paositra. Satria ny mpampianatra dia mety tsy handeha hisoratra anarana amin’ny maha-tale ara-pitsarana izy ireo dia manam-pahaizana eo amin’ny fitantanana ny fambolena orinasa, ary tsy ny mpisolovava sy ny bola
Ny lamin Mpandidy sy mpitsabo nify tao Ancona